Usayizi 28.38 MB
Play 19 059
Zadalwa 16-09-2009 02: 00: 00
Kushintshwe 06-06-2012 18: 35: 59
Umbhali: UBrett Henderson, Alejandro Rojas Lucena http://www.simviation.com/fsnd
100% iyahambisana FSX SP2. High isixazululo ukuthungwa, VC zokusebenza ngokuphelele, indiza Dynamics kanye nemisebenzi enengqondo. An ngaphakathi kabusha ngokuphelele, okuvumela ukuba ukuhamba uzungeze gumbi njengoba umgibeli ayeyokwenza esihlalweni sakhe. izithombe Full of the izingxenye esikhiphekayo ezifana nezitebhisi embarkation.
Funda ngokucophelela yonke imibhalo yayihlanganisa kule iphakethe.
Saab 340 kuyinto ndiza encane eyayimfuqa by turboprops amabili futhi wenza ibanga elincane indiza. It kwatholwa operation co phakathi saab futhi Fairchild Aircraft. Lapho sakamuva bunqamuka wonke umsebenzi, konke ukwakhiwa wahlinzwa ngo-Saab efemini Linkoping eSweden. Ngemva kohambo lwendiza lwamahora okokuqala kwethulwa bezentengiselwano 1983, inguqulo engcono ukusebenza ohlakaniphe yasungulwa wafaka sokuyokhonza e 1989, ngaphansi igama 340 B. Le nguqulo yesibili ikakhulu izinzuzo motorisation ezinamandla ngokwengeziwe futhi ukuzimela esikhulu. Ngemva 430 amayunithi zavezwa, inkampani bavimba yonke zokukhiqiza 1998, kodwa indiza isasetshenziswa izinkampani eziningi zasemoyeni kulo lonke izwe. (Source Wikipedia)
FSND Saab 340 FSX Thwebula
Incazelo 11 575
Zasolwandle Seeker SB7L-360A Serie 2 FSX & P3D
Incazelo 7 920
Incazelo 8 763
I-Grob SPn Utility Jet FSX v3.1.3 3.1.3
Incazelo 12 063
Incazelo 52 286
Incazelo 13 991
Incazelo 2 016
Incazelo 5 655